Ifumene indlu emva kweminyaka ingwevu | News24
Ifumene indlu emva kweminyaka ingwevu
Omnye wabantu abafumene izindlu utata uFunani Qotyiwe uxhakwe nguMalusi Booi, Noluthando Makasi, uBonginkosi Madikizela kunye noceba ka wadi 39 uKhaya Yozi. UMFANEKISO: UNATHI OBOSE
Ibiyimincili kuphela ngethuba abahlali bengingqi i-Section 4, e-KTC, befumana izitshixo zezindlu zabo ezintsha ngoLwesihlanu weveki edlulileyo.
Ezi zindlu zithe zanikezwa ngokusesikweni ngumphathiswa wokuhlaliswa koluntu kwiphondo iNtshona Koloni uBonginkosi Madikizela kunye noMalusi Booi, ilungu lekomiti yesigqeba ka sodolophu elijongene nokuhlaliswa koluntu.
Ngama 235 zizonke izindlu ezithe zakhiwa phantsi kolu phuhliso noluxabisa izigidi ezingama 44 eranti. Olu phuhliso, noluqale kumnyaka ka 2014, kulindeleke ukuba lutshintshe impilo yoninzi loluntu lwala ngingqi, noluthe lwafumana izindlu zezitena okokuqala ngqa kwisithuba seminyaka emininzi.
Ephawula ngezi zindlu u-Booi ukhuthaze uluntu ukuba luzigcine kakuhle kwaye zisemgangathweni. Ukwabongoze uluntu ukuba lwahlukane nomkhwa wokuthengisa izindlu zesibonelelo.
Uthe eyona nto ayithandayo kukuba inkoliso yabantu abaxhamleyo kolu phuhliso ngabantu abadala. “Ningakwazi ukuzifaka kwi-insurance kwezi zingabizi kakhulu niqhubeke nizibhatale ukulungiselela xa kuthe kwehla ingxaki,” ukhuthaze ngelitsho uBooi.
Uthe besi Sixeko saseKapa kwicandelo lezokuhlalisa uluntu basebenzisana ne-ofisi kaMadikizela ukuzama ukuzisa iinkonzo nophuhliso eluntwini ngokukhawuleza. Uchaze olu phuhliso njengenxalenye yokuphuculwa kwendawo yaseNyanga iphela, nalapho kulindeleke ukuba kwakhiwe izindlu ezingama 700 zizonke nezixabisa i 150 yezigidi zeeranti.
U-Madikizela uluchaze olu phuhliso njengekudala lwaqalayo, watsho ebulela abahlali ngokunyamezela kude kube sekugqibeleni.
“Olu phuhliso lwalapha lwaqala kudala ndisaphangela kwi-ofisi kasodolophu ngoko. Kodwa into endiyithandayo kukubona abantu ebabeziinkokheli ngoko koluphuhliso ibe isengabo nangoku,” utshilo Madikizela.
Ugxeke abantu abathi basuswa kwindawo yophuhliso, baze abazichitha iihoki zabo, endaweni yoko bazithengisela abanye abantu.
Uthembise ngelithi ofisi yakhe izakuzama ukuba kukhawuleziswe kuphuhliswe zonke iingingqi ezikufutshane nesikhululo senqwelomoya saseKapa.
U-Madikizela uyibethelele into yokuba bengurhulumente wephondo bazimisile ukusebenzisana neenkokheli zokuhlala, kwaye baqinisekise ukuba yonke into ihamba ngendlela.
“Sizakuqinisekisa ukuba izindlu zifunyanwa ngabantu abadala kuqala. Siqinisekise ukuba ulutsha luyasebenza,” utshilo.
Omnye wabantu abathe baxhamla kolu phuhliso uFunani Qotyiwe, onama 79 eminyaka, uthe uchulumance kakhulu ngoba unexesha elide kakhulu elindile.
“Ndafika apha eKTC nge 80’s oko ndahlala ematyotyombeni. Nangoku andikakholelwa ncam ukuba le ndlu yeyam,” utshilo Qotyiwe.
Woleke ngelithi uyathembisa ukuba uzakuyiphatha kakuhle kwaye akasayi kuyithengisa.
Uceba wakwa wadi 39 uKhaya Yozi uthe kuluvuyo kuye ukubona abantu abadala bexhamla kuphuhliso lwezindlu, bangade baswelekele ematyotyombeni.
Uchaze ukungavisisani kweenkokheli zokuhlala zangaphambili njengenye yezinto ezithe zalibazisa olu phuhliso.
“Izindlu zigqityiwe ukwakhiwa kwezinye kushota kufakelwe umbane kunye namanzi,” utshilo Yozi.